Fiaraha-miasa: Ampiasao ny tambajotranao hanakatonana fifanarahana bebe kokoa amin'ity sehatra fifanakalozan-kevitra momba ny fifandraisana sy Analytics | Martech Zone
Ny fitantanana ny fifandraisan'ny mpanjifa antonony (CRM) ny vahaolana dia sehatra tsy miovaova… base de donnés d'exploitation, ny activité-n'izy ireo, ary; angamba, fampifangaroana sasany amin'ireo rafitra hafa izay manome fahitana fanampiny na fanararaotana ara-barotra. Mandritra izany fotoana izany, ny fifandraisana rehetra ao amin'ny tahiry dia manana fifandraisana matanjaka sy manan-kery amin'ny mpanjifa hafa sy ny mpanapa-kevitra orinasa. Ity fanitarana ny tamba-jotra ity dia mbola tsy voadona.
Inona no atao hoe Intelligence fifandraisana?
Ny teknolojia fahitana fifandraisana dia mamakafaka ny angon-drakitra fifandraisan'ny ekipanao ary mamorona ho azy ny kisary fifandraisana takiana mba hahazoana laharam-pahamehana amin'ny orinasa. Ny tabilao misy fifandraisana dia manolotra fomba fijery feno momba izay fantatry ny ekipanao sy ny fahafantaran'izy ireo azy tsara, amin'izay dia hanoro anao ny làlana tsara indrindra amin'ny fampidirana na referral.
Maninona ny firaisana ara-barotra sy ny faharanitan-tsaina mifandraika amin'ny kaonty dia sendika tonga lafatra
Ny fiarahana dia toy ny fifangaroan'ny LinkedIn sy Salesforce, miaraka amin'ny Artigence Intelligence ihany mba hahatakarana ny tanjaky ny fifandraisana (tsy toy ny LI) sy ireo fitaovana mandeha ho azy hanaisotra ny fanaintainana amin'ny fitantanana CRM. Ny rafitry ny haitao misy patantikan'ny orinasa ary mamakafaka angon-drakitra maherin'ny miliara manerana ny mailaka, ny kalandrie ary ny loharano avy amin'ny antoko fahatelo hanolorana ireo mpampiasa ny fitaovana ilain'izy ireo hitantana azy ireo ny fifandraisana sarobidy indrindra aminy, hanao laharam-pahamehana ireo fifandraisana manan-danja ary hahita ireo fotoana tsy voarara.
vinanton'i tonga dia misambotra ny fifandraisana rehetra ny ekipanao dia manana fifandraisana na fikambanana. Izy io koa dia manatsara ny mombamomba anao miaraka amin'ny antsipirian'ny fifandraisana manan-danja izay mety tsy ho tafiditra ao amin'ireo loharanom-pahalalana an'ny antoko fahatelo toa ny Crunchbase, Clearbit, ary ireo tahiry fanananao manokana.
vinanton'i mamorona Rolodex virtoaly amin'ireo orinasa sy olona rehetra nifaneraseran'ny ekipanao ary manavao izany amin'ny fotoana tena izy.
Affinity Alliance mamela anao mifandray amin'ny hafa ivelan'ny ekipanao hahafantarana hoe iza ao amin'ny tambajotrao no afaka manome fampidirana sarobidy indrindra.
Ny Affinity Analytics dia fitaovana fanaovana tatitra tsy manam-paharoa amin'ny fotoana tena izy izay manome ny fijerin'ny indostria ny fifandraisan'ny ekipa ivelany sy ny fiantraikan'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny fikorianan'ny fifampiraharahana, ny fantsom-pifandraisana, ny hetsiky ny tambajotra ary ireo mari-pamantarana zava-dehibe. Azo alaina izao amin'ny alàlan'ny fampidirana miaraka amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny sehatry ny fandraharahana avy amin'ny Google Cloud, Looker, Affinity Analytics dia tafiditra ao anatin'ny edisiona Premium sy Enterprise an'ny sehatra Affinity na fanavaozana ho an'ny mpanjifa matihanina.
Ny Affinity Analytics dia miorina amin'ny angon-drakitra fototra ao amin'ny sehatry ny fifandraisana eo amin'ny Affinity mba hanomezana hevitra lalina momba ny angona CRM an'ny ekipa. Na dia ny ankamaroan'ny sehatra CRM aza dia tsy manome afa-tsy ny fahaiza-manao fototra sy fanabeazana fototra indrindra, ny Affinity Analytics dia manome tabilao azo ovaina sy tatitra mahazatra, izay manampy ny orinasa hanao fanadihadiana lalina amin'ny fironana sy ny mpamily fahombiazana izay misy fiantraikany amin'ny fizotry ny asa aman-draharaha mitsikera.
Maherin'ny 20 ny tatitra momba ny sary hita amin'ny lisitra rehetra ao anatin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny Affinity. Ny tatitra rehetra dia azo atsofoka lalindalina kokoa amin'ny fizarana manokana toy ny indostrialy mitsangana, ny karazana orinasa, ny haben'ny orinasa, ary ny anton-javatra hafa. Ny mpampiasa dia afaka manondrana na mandefa mailaka mora foana ny tatitra rehetra hizarana izany amin'ireo tompon'andraikitra manan-danja.
Ny antontan-kevitra feno fisehoan-javatra feno dia manome ny fahitana ny fotoana tena izy ho an'ny zava-bitan'ny ekipa misy azy ireo ary ahafahan'izy ireo mandinika ny angon-drakitra mba hahitana valiny amin'ny fanontaniana momba ny toerana sy ny fomba hampiasam-bola ny ezaky ny ekipany sy ny fifantohany. Na dia afaka manangana isan'ireo tatitra azo ampifanarahana amin'ny Affinity Analytics aza ny orinasa, ny roa amin'ireo tatitra efa voaangona dia ahitana:
Fanadihadiana momba ny fantsona: Ahafahan'ny orinasa manara-maso ny zava-bitan'ny fantsona nalainy tamin'ny alàlan'ny famakafakana ny dingana rehetra amin'ny fizotran'ny fifampiraharahana, ao anatin'izany ny tahan'ny fiovam-po isaky ny dingana, ny fotoana antonony nijanonan'ny fifanarahana isaky ny dingana, ny hetsika farany talohan'ny nahazoana ny fifampiraharahana na very, izay misy ny fifanarahana tsara indrindra loharano azo avy, ary maro hafa.
Tatitra momba ny hetsika ho an'ny ekipa: Manome famakafakana ny mailaky ny ekipa, ny antso, ny fivoriana ary ny hetsika hafa, nosimbain'ny indostria, ny faritra, sy ny maro hafa, mba hanomezana hevi-dehibe momba ny zava-bitan'ny ekipa iray sy ny fahombiazana na ny lesoka amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny fanantenana na fifandraisana.
Ny sehatra Affinity dia manampy ny mpampiasa hitantana fifandraisana amin'ny olona 30 tapitrisa sy fikambanana 7 tapitrisa. Miaraka amin'ny Affinity Analytics, ny mpampiasa izao dia manana fahatakarana fanampiny amin'ny fifandraisany amin'ny fifandraisana ivelany sy ny fomba ahafahana manatsara ireo hetsika ireo hanatsarana ny fitantanana sy ny fitantanana ny fantsona.
Vakio bebe kokoa momba ny firaisana Vakio bebe kokoa momba ny Affinity Analytics
Tags: firaisanafanadihadiana momba ny firaisanaaifahaizana artifisialyCRMcrm datafifandraisana amin'ny mpanjifafamakafakana cornelmpijeryfifandraisana ara-tsainasehatra fifantohana fifandraisanahetsiky ny ekipa mpivarotra
Visme: Fitaovana matanjaka hamoronana votoaty Visual mahatalanjona